Warbixin: Qaramada Midoobay oo Sheegtay in Sanadkaan Dhamaadkiisa Xaaladii Ugu Xumeyd ee Beni’aadannimo in ay ka jirto qeybo kamid ah….. | Kismaayo24 News Agency
Warbixin: Qaramada Midoobay oo Sheegtay in Sanadkaan Dhamaadkiisa Xaaladii Ugu Xumeyd ee Beni’aadannimo in ay ka jirto qeybo kamid ah…..
Thursday November 24, 2016 - 11:17 under Somali News by Tifaftiraha K24
War ka soo baxay Barnaamijka isku-duburidka howlaha Bani’aadanimo ee QM ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in abaaraha ka jira Soomaaliya ay yihiin kuwo aad ku adag.
Gobalada ka tirsan Puntland iyo Soomaaliya ayaa warbixinta lagu sheegay in abaartu ay aad u saamaysay, taasi oo haatan soo gaartay gobolada Bartamaha iyo Koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan gobalada Gedo, Hiiraan Galgaduud iyo Jubbada Hoose.
Abaaraha ka jira gobalada qaar ayaa waxaa ay keentay in qiimaha biyaha hor u kaceen gaar ahaan Magaalada Xudur, Bakool 00 66% kor u kacaan, halkan Laascaanood, oo Sool ah 55% biyuhu ay kor u kaceen qiimaha la iibsado, sida warka QM lagu sheegay.
Biyo yerrada ayaa laga baqdin qabaa inay keento Cuduro dheeraad ah oo ka dhasha biyo la’aanta.
Abaartan ayaa ah tii ugu adkayd mudooyinkan lagu arko Soomaaliya.
OCHA ayaa sheegtay in sanadkan gudihiisa ay diiwaan galiyeen 13,600 oo kiis oo la xiriira cudurka AWD/ ama Shuban biyood, ayada oo sanadkii 2015 kii la diiwaan galiyay kiisas gaaraya 5,300.
Lama filo inay da’aan roobab xoogan isbuucyada soo aadan, abaartuna waxaa laga baqdin qabaa inay sii jirto ilaa iyo xili roobaadka soo aadan ee 2017 gaar ahaan bisha April, sida OCHA ay sheegtay.
“Hadii xaaladan ay sii socoto 1.6 da Milyeen oo haatan gargaarka u baahan, waxaa laga cabsanayaa inay sii kororto.20% dadka aanan helin Raashiin maalmeedka waxaa la diiwaan galiyay bishii September ee sanadkan, ayada oo 935,000 00 qof ay ku biireen 1.1 Milyeenka ruux ee gargaarka u baahan mudo lix bilood gudahood”, waxaa sidaa sheegay hay’adaha FAO iyo FSNAU.
Waxaa sidoo kale abaartan ay sababtay inay kordhaan dadkan Carrurta nafaqo darrida haysato.
320,000 00 carruur ah ayaa waxaa haysta nafaqo la’aan, kuwaasi oo 50,000 oo ka mid ah xaaladdooda lala tacaalay.
Waxaa Tarjumay Mohamed Dhaysane